Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hon. Rex Tillerson အား လက်ခံတွေ့ဆုံ (နေပြည်တော်၊ ၁၅-၁၁-၂၀၁၇ ရက်)
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hon. Rex Tillerson အား လက်ခံတွေ့ဆုံ (နေပြည်တော်၊ ၁၅-၁၁-၂၀၁၇ ရက်)
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hon. Rex Tillerson အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(နေပြည်တော်၊ ၁၅-၁၁-၂၀၁၇ ရက်)
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hon. Rex Tillerson အား ယနေ့(၁၃၃၀)နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းမှုအောင်မြင်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုအတွက် ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးပေးရေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် ဖြစ်ပွားနေသော အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမှ ၎င်း၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စ၏ သိမ်မွေ့နက်နဲမှု၊ မြန်မာအစိုးရ၏ သဘောထားအမြင်နှင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုများကို ပိုမိုသိရှိ နားလည်ရေးအတွက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေး အတွက် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေမှုများကို ကြိုဆိုကြောင်း၊ အမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုအကူအညီ အဖြစ် သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့အထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၇ သန်း ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၇ သန်း ထပ်မံပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရေရှည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ရရှိရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၌ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီပေးအပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိရေးအတွက် ပြည်တွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိမှု၊ နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသူများအား စိစစ်ပြီး ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ ပေးအပ် နိုင်ရေးနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ လူငယ်များမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွား နိုင်ရေးအတွက် Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine - UEHRD မှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုများ စသည်တို့ကို ထည့်သွင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။